Faritra iray amin’ireo 22 sisa tsy tafiditry ny Covid-19: tafakatra 99 ireo maty ary 102 ireo marary mafy | NewsMada
Efa-bolana izao ny nidiran’ny Coronavirus eto amintsika. Tafakatra 99 ireo lavon’ity valanaretina ity, hatramin’ny omaly. Rakotry ny Covid-19 avokoa ny faritra 21 amin’ireo 22 manerana ny Nosy.
Faritra faha-21 vao nidiran’ny valanaretina, afakomaly, ny faritra Androy, ao Tsihombe sy ao Ambovombe. Tsy mbola ahitana izany kosa ny any amin’ny faritr’i Melaky hatramin’izao. Ahitana distrika miisa dimy: i Maintirano, i Besalampy, Antsalova, i Morafenobe ary Ambatomainty. Efa miisa 60 ireo distrika tratran’ny Coronavirus ka anisan’ny farany vao nifindrany ny ao Kandreho any Betsiboka.
Etsy andaniny, niampy enina indray ireo lavon’ny Covid-19 ka tetsy amin’ny Homi Soavinandriana ny roa ary efatra teny Befelatanana. Miisa 99 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.
Mbola ivon’ny fifindran’ny valanaretina kosa eto Analamanga. Avy eto avokoa ireo 122 amin’ireo tranga vaovao, miisa 213, araka ny tatitry ny CCO, omaly. Manaraka azy eo ny any Diana, ny any Alaotra Mangoro, ny any Matsiatra Ambony, misy 13 avy. Miisa sivy ireo nifindran’ny Coronavirus any Bongolava raha enina ny any Atsimo Andrefana sy i Boeny. Efatra avy kosa ny any Anosy, ny any Androy, ny any Itasy. Iray ny any Vakinankaratra ary roa hafa tsy voafaritra.
Miisa 84 ireo marary mafy eto Analamanga
Ankoatra izany, miisa 102 ireo ahiana mafy ny fahasalamany « forme grave ». Avy eto Analamanga avokoa ny 84 amin’izany ka mitsinjara ho 48 etsy Befelatanana, HJRA miisa 18, Homi ny roa. Ahitana roa avy eny Fenoarivo sy Anosiala. Misy roa etsy amin’ny CTC-19 Mahamasina ary telo eny Andohatapenaka. Manampy ireo ny any Vakinankaratra ny enina raha fito ny any Fianarantsoa. Samy misy roa avy ny any Atsimo Andrefana sy i Boeny ary Atsinanana ny iray.
Na izany aza, niampy 504 ireo sitrana ka tafakatra 7 117 ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Efa 10 317 kosa ireo tratran’ny coronavirus eto amintsika ary miisa 3 101 ireo mbola manaraka fitsaboana. Fitiliana « PCR » vita miisa 39 864 ary miisa 2 502 ny fitiliana « Genexpert »